Rubber Products Vulcanizing Haanta - Shiinaha Qingdao Makiinado Joogto
Product Codsiga Rubber taangiga waxyaabaha vulcanizing waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta ee alaabta caag vulcanization. waxyaabaha caag wuxuu noqon karaa cable caag, kabaha caag, tuubo caag ah, isaguu caag, koollo, suunka caag, goolhayaha biyo caag, kubada caag, dahaarka caag, jir retread taayirrada, desulphurization caag dib iyo SBR cusbi thermoplastic; anti-daxalka, daaweynta dahaadhida anti-lahayo ku, cunto iyo daawo-dhaqameed Chinese in la baabi'iyo (dishaan) bakteeriyada, dun, baar, GOS ...
waxyaabaha Rubber taangiga vulcanizing waxaa inta badan loo isticmaalaa daaweynta ee alaabta caag vulcanization. waxyaabaha caag wuxuu noqon karaa cable caag, kabaha caag, tuubo caag ah, isaguu caag, koollo, suunka caag, goolhayaha biyo caag, kubada caag, dahaarka caag, jir retread taayirrada, desulphurization caag dib iyo SBR cusbi thermoplastic; anti-daxalka, daaweynta dahaadhida anti-lahayo ku, cunto iyo daawo-dhaqameed Chinese in la baabi'iyo (dishaan) bakteeriyada, dun, baar, sharabaadada ku qufulan kulaylka, xagal Hadyada iyo laf-habeynta-kar, maaddooyinka, hydrolysis baadad kala duwan, waxyaabaha aluminium qayilo. Sidoo kale loo isticmaalaa qalabka carbon, qalabka khilaaf asbestos, gypsum iyo waxyaabaha ay, iyo qalabka kale ee autoclave, cunto karinta, seylaha, qalajiyo. Qaybta labaad ee fikradda design ee taangiga tube caag vulcanizing ah. 1, dabeecadda aadanaha vulcanizer caag The! (Meel xariif, oo muujineysa design dadka-oriented) 2, ammaanka! (Iyadoo la tixraacayo: GB150-2011 "heerarka warshadaha weel cadaadis", ISO9001: Nidaamka shahaado tayada 2008, design shahaado HACCP ammaanka cuntada, soo saaridda) 3, vulcanizer caag waa la isku halayn karo! (Selection of qaybo brand dunida-caan,) 4, vulcanizer caag waa keydinta tamarta! (Heerkulka khasaare, korontada, hawada tilmaantay Tifaftirayaasha BBC, isticmaalka wakhtiga afar macquul ah, iyadoo ayna) 5, Rubber Vulcanizer waa muuqaalka quruxda badan, sheeko, is haysta, fudud! Qaybta saddexaad ee tube caag design ee taangiga vulcanizing, Products salaysan wax soo saarka si waafaqsan adag la "xeerarka awoodda" oo GB150-98, GB151-98 Heerka aqbalo wax soo saarka, macluumaadka damaanad qaranka iyo wadajirka waraaqo farsamo.
Beegyada uu Farsamada ee taangiga vulcanizing tube caag.
taangiga Daaweynta dhexroor / dhererka tube / awoodda buuxa 1500 mm / 3000mm / 5.3m3
cadaadis Design 1.0Mpa
The cadaadiska shaqada ugu badan waa 0.8Mpa
Heerkulka hawlgalka ugu badnaan 180 ℃
Total rakibay awoodda ku saabsan 64KW
Power sahayda danab 380V
Pot jirka Q345 wax
oo dhumucdiisuna waxay derbiga ah ee taangiga jirka 12mm ah
Miisaanka of 3 tons
Qaybta 6 taangiga Daaweynta goobaha qofka jirran (user leedahay)
Air kombaresarada oo katimaada: 0.6m3 / min
Section 7: Astaamaha u gaarka ah taangiga vulcanization
◆ gacanta automatic korontada ,
◆ electronic, double ilaalinta farsamo badan-danab.
◆ farsamo silsilad ammaanka.
◆ saxo weecasho heerkulka electronic.
◆ electronic badan-kulka ilaalinta si toos ah.
◆ alarm logu heerkulka.
◆ xiriir korontada gacanta cadaadis
◆ automatic aammusiiye dubbe uumi.
◆ farqiga heerkulka u dhexeeya dhibcood dheri (qaybinta kulaylka) ee ± 0.5 ℃.
◆ gacanta ku heerkulka Intelligent, sax gacanta ku heerkulka gudahood ± 0.5 ℃.
Waxyaabaha caag, sida caag, vulcanization, desulfurization caag dib, SBR caag thermoplastic; baasaboorka maaddooyinka carbonization, caag, caag, caag, caag, dab Wood, aboor, anti-daxalka, dahaadhida anti-lahayo ku, cunto iyo daawo Chinese lahaansho off (dishaan) bakteeriyada.
Previous: Ahama Steel Cuntada warshadaha Karinta Pot
Next: Timber Wood Anticorrosive Daaweynta Haanta
Mashiinka autoclave qolkii Daaweynta caag
caag vulcanizer autoclave
caag autoclave Daaweynta
Daaweynta caag kartaan
caag weel Daaweynta tuubada
caag autoclave vulcanization
vulcanizing caag kartaan